Reign Of Assassins ( 2010 ) - Myanmar Asian TV
?Reign of Assassins ဟာ မငျမငျးဆကျကာလကိုအ‌ခွခေံပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့ Michelle Yeoh ရဲ့ သိုငျးကားကောငျးလေးတဈကားပါ။ 15ကွိမျ‌မွောကျ Busan International Film ပှဲတျောမှာပွသခဲ့ပွီး တဈပတျအတှငျးဝငျ‌ငှေဒျေါလာ 4.5 သနျးရရှိခဲ့ပါတာမို့မလှတျတမျးကွညျ့သငျ့တဲ့ကားလေးနျော။
စနျးကငျြ/မိုးစကျ အဖွဈ Michelle Yeoh ကနျြးအာရှနျး အဖွဈ Jung Woo-sung
စကွာဘုရငျ အဖွဈ Wang Xueqi
ကြောကျစိမျးရီ အဖွဈ Barbie Shu
လီဘငျ အဖွဈ Shawn Yue
မိုးစကျ အဖွဈ Kelly Lin
ကနျြးရနျဖနျး အဖွဈ Guo Xiaodong တို့ကအဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။
အိန်ဒယပွညျက ဘုနျးတျောကွီးတဈပါးဟာတရုပျပွညျကိုကွှလာခဲ့တယျ။ အဲ့ဒိဘုနျးတျောကွီးပြံလှနျတျောမူတဲ့အခါသူ့ရဲ့ရုပျကလာပျတျောကိုရတဲ့သူဟာသိုငျးလောကကိုအုပျစိုးနိုငျမယျလို့‌ကောလဟာလတှထှေကျခဲ့တာကွောငျ့သိုငျးလောကသားတှကေ ရုပျကလာပျတျောကိုရှာရငျးစဈပှဲတှဖွေဈပှားခဲ့တယျ။ ရုပျကလာပျတျောတဈပိုငျးကအမတျကွီး ကနျြးရဲ့လကျထဲမှာရှိကွောငျးသတငျးထှကျလာတဲ့အခါ အမှောငျကြောကျတုံးဂိုဏျးကလူသတျသမားတှကေ အမတျကွီးကနျြးအိမျတျောကိုဝငျရောကျတိုကျခိုကျပွီးမိသားစုတဈစုလုံးကိုသတျခဲ့တယျ။ တိုကျပှဲအတှငျးမှာအ‌မှောငျ‌ကြောကျတုံးဂိုဏျးရဲ့လူသတျသမား မိုးစကျဟာ ရုပျကလာပျတျောတဈပိုငျးကိူယူပွီးထှကျပွေးခဲ့တယျ။ အဲ့ဒိနောကျ ပညာရှိလြှိုကြို့နဲ့တှပွေီ့း သူဟာအသိတရားရခဲ့တယျ။ အဲ့တာကွောငျ့သူ့မကျြနှာကိုခှဲစိတျပွုပွငျပွီး ဘဝအသဈစခဲ့တယျ။ ဘဝအသဈမှာ အိမျထောငျကပြွီးတဲ့နောကျမှာတော့ အမှောကျကြောကျတုံးဂိုဏျးက သူ့ကိုပွနျရှာတှသှေ့ားပွီး သူတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျရဲ့အသကျနဲ့ခွိမျးခွောကျပွီး ရုပျကလာပျကိုရှာခိုငျးခဲ့တယျ။ နာမညျတဈလုံးနဲ့သိုငျးလောကကိုကိုငျလှုပျနိုငျတဲ့ လူသတျသမားမိုးစကျ ခဈြမိတဲ့ယောကြားကဘယျလိုလူမြိုးဖွဈ‌နေမလဲ…….? ၊ သူတို့ဇနီးမောငျနှံကွားမှာ ဘယျလိုကံကွမ်မာမြိုးတှဖေနျလာမလဲ ဆိုတာ…….Reign of Assassins ကားထဲမှာပဲဆကျကွညျ့လိုကျရအောငျ………
?Reign of Assassins ဟာ မင်မင်းဆက်ကာလကိုအ‌ခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Michelle Yeoh ရဲ့ သိုင်းကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။ 15ကြိမ်‌မြောက် Busan International Film ပွဲတော်မှာပြသခဲ့ပြီး တစ်ပတ်အတွင်းဝင်‌ငွေဒေါ်လာ 4.5 သန်းရရှိခဲ့ပါတာမို့မလွတ်တမ်းကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးနော်။
စန်းကျင်/မိုးစက် အဖြစ် Michelle Yeoh ကျန်းအာရှန်း အဖြစ် Jung Woo-sung
စကြာဘုရင် အဖြစ် Wang Xueqi
ကျောက်စိမ်းရီ အဖြစ် Barbie Shu
လီဘင် အဖြစ် Shawn Yue
မိုးစက် အဖြစ် Kelly Lin
ကျန်းရန်ဖန်း အဖြစ် Guo Xiaodong တို့ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
အိန္ဒယပြည်က ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဟာတရုပ်ပြည်ကိုကြွလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒိဘုန်းတော်ကြီးပျံလွန်တော်မူတဲ့အခါသူ့ရဲ့ရုပ်ကလာပ်တော်ကိုရတဲ့သူဟာသိုင်းလောကကိုအုပ်စိုးနိုင်မယ်လို့‌ကောလဟာလတွေထွက်ခဲ့တာကြောင့်သိုင်းလောကသားတွေက ရုပ်ကလာပ်တော်ကိုရှာရင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ရုပ်ကလာပ်တော်တစ်ပိုင်းကအမတ်ကြီး ကျန်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိကြောင်းသတင်းထွက်လာတဲ့အခါ အမှောင်ကျောက်တုံးဂိုဏ်းကလူသတ်သမားတွေက အမတ်ကြီးကျန်းအိမ်တော်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးကိုသတ်ခဲ့တယ်။ တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအ‌မှောင်‌ကျောက်တုံးဂိုဏ်းရဲ့လူသတ်သမား မိုးစက်ဟာ ရုပ်ကလာပ်တော်တစ်ပိုင်းကိူယူပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒိနောက် ပညာရှိလျှိုကျို့နဲ့တွေ့ပြီး သူဟာအသိတရားရခဲ့တယ်။ အဲ့တာကြောင့်သူ့မျက်နှာကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီး ဘဝအသစ်စခဲ့တယ်။ ဘဝအသစ်မှာ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အမှောက်ကျောက်တုံးဂိုဏ်းက သူ့ကိုပြန်ရှာတွေ့သွားပြီး သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်နဲ့ခြိမ်းခြောက်ပြီး ရုပ်ကလာပ်ကိုရှာခိုင်းခဲ့တယ်။ နာမည်တစ်လုံးနဲ့သိုင်းလောကကိုကိုင်လှုပ်နိုင်တဲ့ လူသတ်သမားမိုးစက် ချစ်မိတဲ့ယောကျားကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်‌နေမလဲ…….? ၊ သူတို့ဇနီးမောင်နှံကြားမှာ ဘယ်လိုကံကြမ္မာမျိုးတွေဖန်လာမလဲ ဆိုတာ…….Reign of Assassins ကားထဲမှာပဲဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်………
Translator : Juu May Kyaw
Actors: Barbie Hsu, Jung Woo-sung, Kelly Lin, Michelle Yeoh, Shawn Yue, Wang Xueqi
Mega.nz Myanmar1.14 GB Download Soliddrive.co Myanmar1.14 GB Download